Johannes Gutenberg University of Mainz - Ọmụmụ na Germany
Johannes Gutenberg University of Mainz Nkọwa
tọrọ ntọala : 1477
Echefukwala atụle Johannes Gutenberg University of Mainz
Idebanye aha na Johannes Gutenberg University of Mainz
na banyere 33,000 ụmụ akwụkwọ si banyere 130 mba, Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) bụ otu n'ime ndị kasị ibu mahadum na Germany. Dị ka nanị mbara mahadum na Rhineland-Palatinate, JGU agwakọta fọrọ nke nta niile agụmakwụkwọ ọzụzụ n'okpuru otu ụlọ, gụnyere Mainz University Medical Center, ndị School of Music, na Mainz Academy of Arts. Nke a bụ a pụrụ iche mma na German agụmakwụkwọ odida obodo. na 75 ubi nke na-amụ na a ngụkọta nke 242 ogo ọmụmụ, na nsonye 106 Bachelor si na 116 Master ogo mmemme, JGU awade oké sara mbara ọmụmụ. ụfọdụ 4,360 ọmụmụ ha, na nsonye 548 professors, akụzi ma na-eduzi nnyocha JGU karịrị 150 ngalaba, institutes, na clinics (gụnyere Mainz University Medical Center; dị ka nke December 1, 2014; ego site na gọọmenti etiti na-atọ ndị ọzọ ego).
JGU bụ a n'ụwa nile ma ama research mahadum nke mba na mba ude. Nke a aha na-abịa ekele ya pụtara ìhè onye na-eme nnyocha dị ka nke ọma dị ka pụrụ iche research rụzuru na ubi nke urughuru na hadron physics, ihe sayensị, translational na nkà mmụta ọgwụ, ndụ sayensị, media ọzụzụ, na akụkọ ihe mere omenala ọmụmụ.
JGU si na nkà mmụta sayensị n'ike agha nke e kwadoro ya unen ke Ọkasị Initiative site German gọọmenti etiti na onodu ọchịchị na-akwalite n'elu-larịị nnyocha na German mahadum: Mainz University bụ otu n'ime 23 mahadum na Germany na natara ihu ọma a na-akpọ Ụyọkọ Ọkasị nakwa dị ka ihu ọma a Graduate School of Ọkasị. The Ụyọkọ Ọkasị on “nkenke Physics, Isi interactions na Structure nke Ihe” (PRISMA), nke bụ isi a mmekota n'etiti urughuru na hadron ọmụmụ physics, na Graduate School of Ọkasị “Ihe Science na Mainz” (Mainz) na-ahụta n'etiti J.Randall research iche iche n'ụwa nile. Abụọ ndị a oru ngo ga-enweta ego ka akụ nke EUR 50 nde site 2017.
The mahadum ọma ọnọdụ ke mba na mba rankings na award nke ọtụtụ nnyocha nwa anụmanụ ndị ọzọ na nkwenye nke na ọ dị mkpa na ihe ịga nke ọma nke nnyocha na-eduzi site JGU dabeere ọmụmụ. Nke a nke ọma e mere na o kwere omume na akụkụ site na pụrụ iche nnukwu-ọnụ ọgụgụ research akụrụngwa dị na Mainz University, dị ka TRIGA ìhè mmiri research chernobyl na MAMI elektrọn ome osooso, nke abụọ na-adọta eme nnyocha si gburugburu ụwa. The nnyocha na-agba mbọ izi - na ezubere iche na n'oge mwekota nke research ọdịnaya n'ime usoro ọmụmụ - bụ ihe ọzọ na isi mmewere nke JGU nkà ihe ọmụma.
JGU bụ naanị German mahadum nke a size na ikpokọta fọrọ nke nta niile institutes na otu campus, mgbe na-ụlọ anọ na onye òtù ọlụlụ nnyocha oru na-eduzi ọnwụ onu research n'èzí nzukọ Ọdịdị nke mahadum onwe ya. E nwekwara on-campus-amụrụ dormitories na Childcare ụlọ ọrụ. The Clinical na-adakarị / tiori institutes nke Mainz University Medical Center na-emi odude n'ime Olee ihe enyemaka otu kilometa nke campus.
JGU ndụ echiche nke a Civic mahadum ịbụ ihe akụkụ nke ọha mmadụ na-akwado ndị obodo ọ bụ akụkụ nke. Nke a pụtara na ọ na-enyekwa ndụ mmụta omume na-akwalite adọ na mbara ihe ọmụma na nkà na ụzụ nyefe.
hiwere na 1477 n'oge oge nke Johannes Gutenberg na kpọliteghachiri mgbe a 150 afọ nkwụsịtụ 1946 site French agha ahụ dabeere na Germany, Johannes Gutenberg University Mainz ụgwọ inye ukwuu ka nwoke aha ọ na-agba na ya rụrụ. Na ihe niile ọ rụrụ n'uche, mahadum agbalịsie ike na-akwalite ma mejuputa otutu echiche, iji nyere aka melite ọnọdụ ndụ ndị mmadụ site ọmụma, ikwado ha ohere agụmakwụkwọ na sayensị, na ịgba ndị mmadụ ume na transcend ọtụtụ restraints na ha na-ezute na kwa ụbọchị.
Nke a bụ ozi na Johannes Gutenberg University Mainz si mee onwe ya.
Dị ka mba ofesi center maka nnyocha, ozizi, na mmụta, Johannes Gutenberg University Mainz nwere ihe pụrụ iche nkwa na-agafe ókè mba na mba na omenala. Nke a nkwa na-guzobere na ya ozi okwu na-emeri na echiche, na a na-egosi na ya siri ike mba mmekọrịta. Mainz University bụ ifịk player ke uwa netwọk nke sayensị na-eme nnyocha nakwa izi na mmụta.
The mba ọrụ JGU ọkà mmụta sayensị a na-akwado na netwọk nke 145 ekwenyere ibe mahadum on niile kọntinent. Anyị na-enwe 700 imekọ ihe ọnụ nkwekọrịta na European onye mahadum na Erasmus omume.
About 4,000 JGU Mmụta-abịa si mba ọzọ. A ngụkọta, iri na otu percent nke mkpokọta amụrụ ahu.
n'ihi na afọ, JGU kemgbe otu n'ime ndị na-eduga na mahadum na European amụrụ na lecturer mgbanwe mmemme. The University e ọdịda nke DAAD Erasmus Quality Label E-Quality 2013 nke anọ oge na-ama - mgbe 2004, 2007, na 2011 - n'ihi na ya pụtara ìhè, mmejuputa iwu nke Erasmus amụrụ agagharị mmemme.
Anyị isi mpaghara n'ihi na nkà mmụta sayensị na-amụrụ mgbanwe na-agụnye mba Europe France na Poland nakwa dị ka United States of America, South Korea, na China na mpụga nke Europe.
Mainz University ụgbọ oloko ya ụmụ akwụkwọ na-zuru ụwa ọnụ na ụmụ amaala: ụmụ akwụkwọ na niile ọmụmụ nke ọmụmụ pụrụ ịmụ ná mba ọzọ n'ihi na otu onye ma ọ bụ abụọ semesters. Na mgbakwunye, JGU nakwa awade ọmụmụ nke ọmụmụ na njikọ na mba ọzọ mahadum. Na ihe karịrị 650 ọmụmụ ekenịmde ke asụsụ ọzọ ka German dị ka nke ọma dị ọtụtụ asụsụ ala ọzọ ọmụmụ, JGU na-enye nwa-eme nnyocha na ndị magburu onwe nkwadebe maka mba ọrụ.
Catholic nkà mmụta okpukpe na Protestant nkà mmụta okpukpe
Social Sciences, Media na Sport Science
Philosophy na Philology
Asụsụ na Cultural Studies
Historical na Cultural Studies
Physics, mgbakọ na mwepụ na kọmputa sayensị
Chemistry, Ere ọgwụ na Earth Sciences
Na mmeghe nke University of Mainz na 1477, Achịbishọp nke Mainz, Elector na chancelo nke German Nation, Diether von Isenburg, ghọtara na nrọ nke ya ụzọ. Omume ya bu nnọọ na akara na mmụọ nke oge, ka mpaghara mahadum ama na a tọrọ ntọala fọrọ nke nta niile nke ibu territorial ekwu.
na Mainz, nkà mmụta okpukpe, nkà mmụta ọgwụ, na Church na Roman iwu na kụziri na mgbakwunye na nke asaa na-emesapụ aka nkà, i.e. ụtọ asụsụ, ihapu otutu okwu, dialectics, som, jiometrị, astronomy, na music. Nke a nso nke na-achị bụ a nnọọ pụrụ iche mma n'oge, n'ihi na ọtụtụ European mahadum chụrụ na otu ma ọ bụ abụọ ndị a “elu ikike iche.”
Ukwuu ma ama ama ke afọ 1508
The University of Mainz mụbara. Na mbụ ya ole na ole ọtụtụ iri afọ, na ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ bilie banyere 200. na na 1508, Mainz University ama "nke ukwuu ma ama,"Dị ka Petrus Ravenna chronicled. Otú ọ dị, ugboro ugboro mgbalị na mgbanwe - na 1523, 1535, na 1541 - egosipụta na mahadum enwetawo ya nke mbụ ya nsogbu, mere bụ isi ya erughị eru aku ntọala. Ọzọkwa, Ndozigharị Ndị Protestant malitere na udi ma na esighi ahapụ akara ya na obodo nke Mainz.
Site mmeghe a Jesuit mahadum ke 1561, Achịbishọp nke Mainz chua ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ. Ya mere, ọ malitere oké izi mgbalị inyere ndị Catholic Ndozigharị na aka eme na-akawanye na mahadum. Ọ ịga nke ọma na-eme otú ọ bụghị naanị na ubi nke nkà mmụta okpukpe ma na-na nkà mmụta ọgwụ. N'ikpeazụ, e ọbụna mkpa nke a ọhụrụ ụlọ: na Home Universitatis e wuru n'agbata 1615 na 1618. Taa akụkọ ihe mere eme ụlọ akwado mahadum School of Journalism na Institute of European History.
na Mainz, dị ka n'ebe ndị ọzọ, Iri Afọ Atọ War (1618-1648) akpatawo a dị ịrịba ojuju na ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ. Mgbe Swedish agha nwere obodo, ndị òtù nke Mainz University wee banye "n'agha" ka Cologne, ọmụmaatụ, ebe ha nọ na-akụzi. Mgbe agha, na University nke Mainz bụ naanị onye na-adịghị na-agbake.
Secure aku ntọala
Ịgbaso suppression nke Jesuit Order na 1773, ya Mainz mahadum e disbanded otu afọ ahụ. Nke a chọrọ iji ọzọ mgbanwe nke mahadum ụkpụrụ. N'ikpeazụ na 1781, na Mainz University Foundation Fund e guzobere na-eke a ala aku ntọala maka mahadum. Ọzọkwa, Mainz University ugbu a akp ya ​​nso nke na-achị na ọzụzụ. Ya ọhụrụ Faculty of Historical Statistics lekwasịrị anya akụkụ dị iche iche n'ime ubi nke akụkọ ihe mere eme nakwa dị ka oha, ọha iwu, na ọnụ ọgụgụ. A Faculty of Cameralistics e guzobere, nke gụnyere, ọmụmaatụ, ozizi mgbakọ na mwepụ, botani, na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ omume nke anụ ụlọ. Dị nnọọ ka na mmalite, usoro ọmụmụ na-gụnyere nkà mmụta okpukpe na nkà mmụta ọgwụ. Nke a sara mbara elu ugwu nke na-achị dọtara ruo 700 ụmụ akwụkwọ na-abịa ka Mainz na-esote afọ ole na ole. N'oge ahụ, Mainz University e ekara site na Enlightenment na bụ n'ụlọ eleghị anya, otu nke kasị mma-mara ndị ọkà mmụta nke ochie mahadum: Georg Forster, na-arụ ọrụ dị ka isi oba na Mahadum nke Mainz. The-enwe ọganihu Mainz University si oge a jere ozi dị ka a nlereanya ka a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọzọ dị mkpa European mahadum.
The French mgbanwe (1789-1799) ekpe ọtụtụ metụtara na Mainz. Na ya Ruth, mbụ Republic na German ala e hiwere na 1792. Akụziri na Mainz University, Otú ọ dị, kwụsịrị n'ihi na agha na-adịgide adịgide Ọgba aghara, mmeri na jideekwaozo nke obodo nke Mainz. The Faculty of Medicine ẹkenịmde na-eru ọgwụgwụ na ọdịda ya doctorates nri ruo mgbe 1818, ma na-emechi afọ ise gasịrị.
Naanị Mainz University Foundation Fund, a Catholic seminarị, na Mainz “na-amụ nwa,” a akwụkwọ maka midwives hiwere na 1784, wee na-adị n'elu oge, echebekwa a obere nke mahadum omenala ya ruo mgbe reopening na 1946. Tupu ụbọchị ahụ, e nwere nọgide mkparịta ụka banyere reestablishing dum mahadum-larịị ozizi ọrụ, ma ihe niile ndị a atụmatụ okpu ruru a enweghị ego.
on May 15, 1946, Johannes Gutenberg University Mainz maliteghachiri ya ozizi eme n'okpuru ya aha ọhụrụ. A ngụkọta nke 2,088 ụmụ akwụkwọ e debara na oghere ọkara afọ agụmakwụkwọ na, n'ihi na oge mbụ n'akụkọ ihe mere eme, nwanyi ụmụ akwụkwọ na-kwetara kwa. Akụziri na eke na sayensị malitere na 1946/47 oyi ọkara afọ agụmakwụkwọ na mụbara ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ na- 4,205.
Na mahadum reopening nri mgbe World War II, na French agha ọchịchị gbalịrị ime ka a onyinye ọzụzụ Germany na a "mmụọ ọhụrụ." The ọhụrụ Mainz University e odude ke bụbu agha n'ogige, nke bụ ntọala nke oge anyị a mba campus mahadum. Ebe ọ bụ na JGU campus-emi odude n'ebe dịtụ anya na Mainz obodo center, mahadum mgbe haziri a dịgasị iche iche nke outreach eme nke akpatawo a pụrụ iche Pọtụfoliyo nke formats aiming na ọha na eze na nghọta nke sayensị. Ihe na-agụnye, ọmụmaatụ, sayensị na-eme ememme, na-eme nnyocha 'abalị, expositions, na okwu ihu ọha na Gutenberg campus nakwa na ogbe ndịda omenala oru dị ka Mainz State Ụlọ ihe nkiri ma ọ bụ obodo dị iche iche ngosi ihe mgbe ochie.
Na ndị na-esonụ ọtụtụ iri afọ, Johannes Gutenberg University Mainz nwetara a na-aga n'ihu ibu ya ọgụgụ ụmụ akwụkwọ na nso nke ọzụzụ nyere. na 2011, ọmụmaatụ, JGU gua banyere 37,000 ụmụ akwụkwọ si 130 mba na awa 145 dị iche iche na-achị, haziri na 119 Bachelor si na 96 Master ogo mmemme. N'ịbụ a mbara mahadum, Johannes Gutenberg University Mainz na-ekpuchi fọrọ nke nta niile agụmakwụkwọ ọzụzụ, gụnyere Mainz University Medical Center, na Mainz School of Music, na Mainz Academy nke Arts - a obere ma bara uru ụdị nzukọ n'ime German odida obodo nke elu-akụziri.
The JGU General Studies mmemme, na International Summer Course, ngalaba nke Translation Studies, Linguistics, na Cultural Studies in Germersheim, na mahadum ọtụtụ mba mmekọrịta bụ ezi ihe nlereanya n'ime ihe mgbaru ọsọ setịpụrụ reopening mahadum. Nọgidere na ịdị adị nke ikike nke Catholic na Protestant nkà mmụta okpukpe, kpọmkwem aha nke mahadum, na ọtụtụ n'okporo ámá aha na campus ka ịmụta njikọ n'etiti "ochie" na "ọhụrụ" na mahadum. N'ihi ya, Johannes Gutenberg University Mainz nwere ike ise na ọtụtụ ndị ezi ma na-asọpụrụ omenala na-aghọta ha n'oge ọrụ, dị ka e depụtara na JGU Mission Nkwupụta.
Ị chọrọ atụle Johannes Gutenberg University of Mainz ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Johannes Gutenberg University of Mainz na Map
photos: Johannes Gutenberg University of Mainz ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Johannes Gutenberg University of Mainz.